ads bit 392047
KKP True Smart TIMMY Ramos MyPhone ORRO Hisense HAIWEI GFIVE IPhone Clone CircleTech BluemixVG AOVO AOTO ILOVFA Huawei Clone Vital LOLO Love
ads bit 795993
Hello Firmware တွေ သူများ upload တင်ထားသာတွေ့လို့ ယူလာသည် Crd
အစကတော့မွေးနေ့တုန်းကတင်ပေးမလို့ဘဲ မွေးနေ့တုန်းက အလုပ်ရှုပ်သွားလို့ အခုမှတင်ပေးလိုက်တာပါ Hello Model ထဲကနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ File တွေရှိရင်လဲ လာပီးတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
File Password = birthday22
Xiaomi bootloader unlock files
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_ugg-lite-unlock
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Redmi-Note-5A
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_RedmiNote_7_Lavender(bootloader unlock)
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Redmi7
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Redmi6Pro Sakura
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Redmi S2
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_REDMI NOTE 3
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_PocoPHONE
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Note7
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_MiSingUnlock
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Mi9SE
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Mi8 lite
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Mi max 3
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_Max2
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_To Download.txt
XIAOMI BOOTLOADER UNLOCK FILES\_MIUnlock.exe
XIAOMI_BOOTLOADER_UNLOCK_FILES.rar, Size 106.04 MB... http://getsl.me/gp0K
Labels: Androd Xiaomi
In this tutorial, We will show you how to Unlock Bootloader of Xiaomi Phones using Mi flash toolwhich is officially provided by Xiaomi.
Xiaomi ဖုန်းများကို Boot Loader Unlock ပြုလုပ်နည်းစာအုပ်
Redmi Note3နဲ့နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Xiaomi Phones မှန်သမျှမှာ Boot Loader Lock ဖြစ်လာပါတယ်။ အရင် Model တွေထဲက (Mi4c, Mi Note Pro, ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ မမှတ်မိ..Mi4 series ထဲကတွေပါပဲ.. Firmware update လုပ်ရင် Boot Loader Lock ဖြစ်သွားပါတယ်)။
Boot Loader Lock ဖြစ်လို့ Firmware တင်ချင်ရင် EDL mode ကနေပဲ တင်လို့ရတော့ပါတယ်။ Stock Recovery မှာ User တွေအသုံးချနိုင်မယ့် Command UI ပါမလာတော့ပါ။ သည်တော့ Lock Screen Password မေ့တာတွေမှာ Factory Reset ချတာတွေမလုပ်နိုင်တော့ပါ။ Root ချင်တာတွေ၊ အခြားသော System ပိုင်း ကလိချင်တာတွေအတွက် Custom Recoveries (TWRP) သွင်းမရတော့ပါ။
သည်တော့ မိမိဖုန်းကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် control လုပ်နိုင်ဖို့၊ သုံးနိုင်ဖို့အတွက် Boot Loader ကို အရင် Unlock လုပ်ရပါတယ်။ အဓိကလုပ်ကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ TWRP သွင်း၊ root လုပ်ပြီး နေရာအစုံမှာ မြန်မာစာ မှန်နေအောင်အတွက်ပါ။
TWRP သွင်းထားတော့ တစ်စုံတစ်ရာ error ကြောင့် ဖုန်း boot မတက်တော့ရင်လည်း ကိုယ့် data တွေမဆုံးရှုံးစေပဲ Recover ပြန်လုပ်နိုင်တာတွေ လည်း ရှိတာပေါ့။
ဖုန်းထဲမှာ TWRP ကို permanent သွင်းမထားရင်တောင် TWRP လေးနဲ့ဖုန်းကို ခဏ boot တက်.. လိုတာလေးတွေပြင်.. ပြီးမှ normal boot ပြန်တက်.. အစရှိသည်ဖြင့် မိမိဥာဏ်ကွန့်ရင် ကွန့်နိုင်သလို ဖုန်းကို လိုသလို control လုပ် အသုံးချလို့ ပိုလွယ်ကူတာပေါ့။
အချို့ကလည်းပြောကြတာပေါ့.. Boot loader lock လုပ်ထားတာဟာ ကိုယ့်ဖုန်းပျောက်သွားရင်တောင် သူတစ်ပါးက ဖုန်းကို အလွယ်သုံးမရအောင်.. မိမိအရေးကြီး data တွေ သူတစ်ပါးသုံးမရအောင် လုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့။
ဖုန်းမပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ကတော့ မိမိနဲ့ 100% ပဲသက်ဆိုင်တာပါ၊ Boot Loader က ထူးထွေ protect လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် တူကြမယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ကဲ…. Boot Loader Unlock လုပ်မယ်ဆို ဘာတွေလိုမလည်း။ Xiaomi Phones တွေမှာ Boot Loader ကို Unlock လုပ်ဖို့ အများပြောသလို unlock code တောင်းတယ်… unlock code တောင်းတယ်.. ဆိုတာ လုပ်ရတာမဟုတ်ပါ။
အခြားသောဖုန်းတွေလို Web Site မှာ၊ Email မှာပြန်လာတဲ့ code ကို
fastboot mode ကနေ command နဲ့ထည့်ပေးရတာမဟုတ်ပါ။
Xiaomi ကထုတ်ထားတဲ့ Boot Loader Unlock Tool ကို အသုံးပြုရတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီး Unlock Tool သုံးပြီး Boot Loader Unlock လုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့် Mi Account ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
ဖုန်းမှာလည်း အဲသည် Mi Account Login ၀င်ထားခဲ့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာလည်း Internet Connection ရနေရပြီး Boot Loader Unlock Tool မှာလည်း Unlock လုပ်ချင်တဲ့ ဖုန်းမှာ login ၀င်ထားတဲ့ Mi Account နဲ့ Login ၀င်ရပါတယ်။
သည်တော့ Boot Loader Unlock လုပ်တဲ့နေရာမှာ မိမိ Mi Account သာ
အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ် ချက်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။
သည်တော့ ကိုယ့် Mi Account ကို Boot Loader Unlock လုပ်ခွင့်ရမယ့် Permission ရဖို့ Xiaomi ထံမှ Permission တောင်းရပါတယ်။ Xiaomi မှ Boot Loader Unlock လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့ SMS ပြန်ပို့လာချိန်မှ Unlock Tool ကိုသုံးပြီး Boot Loader Unlock လုပ်ရပါတယ်။
ကိုယ့် Mi Account မှာ Designer Account permission တွေ ထပ်တိုးတောင်းသလိုပေါ့။
ကဲဒီ Introduction လေးကို ဖတ်ကြည့်လိုကက်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်လေးက
Xiaomi ဖုန်းများကို Boot Loader Unlock ပြုလုပ်နည်းအတွက်
ရေးသားထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ ရှင်းလင်းပြီး ကောင်းလွန်းမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကိုတော့ Bro Thet Zaw Ko မှ MIUI Fans များအတွက်
အထူးရေးသား မျှဝေပေးထားတဲ့ PDF Version စာအုပ်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ထဲပါ အကြောင်းအရာ Tutorial များကိုတော့ စာအုပ်ကိုဒေါင်းလော့ပြီးမှ
Xiaomi ဖုန်းများကို Boot Loader Unlock ပြုလုပ်နည်းစာအုပ်>>>http://www.zunite.org/2016/12/xiaomi-boot-loader-unlock.html
Credit: Thet Zaw Ko
C版本带VoTEL.rar 1.39 GB
PD1510_C_3.7.7_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939_split.tar.gz, Size 1.64 GB...
VIVO Y51A_PD1510_C(China Region)
Qcn file for IMEI & Baseband fix
Y51A တရုတ်region အလုံး အတွက်
qcn file ပါ
imei သို့မဟုတ် baseband unknown ဖြစ်နေသည့် အချိန်
diag mode ဖွင့်ပြီး
qpst or qfil တစ်ခုခုနဲ့
Device Brand : HELLO
Device Model : A7
Device IntName : A7
Device Compile : 1/3/2019 3:47:52 AM
Hello_A7_Firmware_By_HAKmobile.7z, Size 447.21 MB...
Download All File Password - HAKmobile
အစကတော့မွေးနေ့တုန်းကတင်ပေးမလို့ဘဲ မွေးနေ့တုန်းက အလုပ်ရှုပ်သွားလို့ အခုမှတင်ပေးလိုက်တာပါ Hello Model ထဲကနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ File တွေရှိရင်လဲ လ...
Lucky cash pay pal money
Lucky cash pay pal money Lucky cash pay pal money android app မှ pay pal money ရှာနည်း ပထမဆုံး app ကို ဒေါင်းပါ #The new user lo...
NewKingrootV5.0.5 ♪ Android OS 2.2 မှ 5.1 အထိအမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ (One Click) - KingRoot v5.0.5 build 20170313 Apk (March-1...
Xiaomi Tralala Tool
ဒီ tool လေး က စွမ်းမယ့် ပုံဘဲ Xiaomi Tralala Tool ************************ 1 - Xiaomi Firmware Download2- Xiaomi Account Bypass3- ...
Tecno B3 (MTK Backup) (TECNO_B3ALPS.GB2.MP.V2) [Hovatek]_Stock_backup_(MTK)_for_Tecno_B3.rar, Size 140.36 MB... B3-ZA230D_6BA0_V1_1_0_DCC...
Wave K1 firmware
Wave K1 firmware လိုင်းပေါ် wave နာမည်နဲ့မရှိဘူး လိုချင်တဲ့သူယူပါခင်ဗျ TXD_K1_MT6580_20180106_5.1.zip, Size 478.42 MB... http://www.mediafir...
Android Tool-MRT Dongle Crack
Android Tool-MRT Dongle Crack MRT Dongle မ၀ယ်စရာမလိုဘဲကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် MRT Dongle Tool (Crack version) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ...
google drive 27 TB one year access
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖုန်း software လုပ်ငန်း အဆင်ပြေ စေရန် အလိုငှာ ဖန်ဝဲအဟောင်း များ အားလုံးကို စုစည်းထားပြီး အမှိုက် ဈေးဖြင့် ဈေး သက်သာ...
NewKingrootV5.0 Kingo root 5.0 apk com.kingroot.kinguser_5.0.0-161_minAPI9(nodpi).apk, Size 16.30 MB... https://www.4shared.com/...
Steve Jobs’ Last Words: စတိဗ်ဂျော့စ်ရဲ့နောက်ဆုံး စကားလုံးများ (ဝါ) စတိဗ်ဂျော့စ်ရဲ့သံဝေဂ။ I reached the pinnacle of success in the busine...
web blog ထောင် နည်း သင်တန်း
web blog ထောင် နည်း သင်တန်း hosting ကို အသုံး ပြုထောင် ခြင်း hosting မတတ်နိုင်သူက blog google host ကို သုံးပြုပြီး ထောင် ခြင် ...
ADS (416) Alcatel (3) All winner (3) Androd Xiaomi (249) Android Antivirus (6) Android application (15) Android Command (3) Android Coolpad (39) Android Font (60) Android Game (2) Android Google Application (13) Android Huawei Imei Repair (1) Android Huawei Y series (6) Android kingo root (4) Android MTK Driver (6) Android Samsung (16) Android Samsung A series (24) Android Samsung C series (5) Android Samsung E series (5) Android Samsung G series (82) Android Samsung Hard reset (7) Android Samsung I series (7) Android Samsung Imei repair (6) Android Samsung J series (66) Android Samsung Multi file (1) Android Samsung N series (34) Android Samsung P series (2) Android Samsung Root (8) Android Samsung S series (9) Android Samsung SC series (6) Android Samsung Solutions (3) Android Samsung T series (3) Android Tool (238) Antivirus (7) AOTO (6) AOVO (8) Aplus (6) Archos (1) Asus (6) Attila (14) BenWee (2) BLU (1) Bluemix (2) Book (5) book eng (1) book med (11) Boss style (1) Bravo (2) browser (3) Browser Adobe Flash Player (1) Browser Firefox (1) CAZSH (1) Cherry (5) China Phone (74) CircleTech (2) CKTEL (2) Ding Ding (2) Download best (16) Education Make up (5) emmc (1) Entertainment (5) Facebook (2) films (1) Finance (2) Firmware Collection (23) FRP (61) Funny (3) GFIVE (3) Gionee (4) Grand (1) HAIWEI (3) Hardware (16) Hello (39) Hisense (17) Hiway (2) Hopo (22) HTC (7) Huawei A series (22) Huawei B series (13) Huawei board software collection (14) Huawei C series (43) Huawei Clone (18) Huawei D series (3) Huawei Driver (1) Huawei E series (17) Huawei emmc data (1) Huawei F series (7) Huawei Flashtool (46) Huawei G series (51) Huawei H Series (7) Huawei J series (1) Huawei K series (3) Huawei L series (18) Huawei M series (5) Huawei N series (3) Huawei P series (10) Huawei R series (5) Huawei region code (3) Huawei S series (10) Huawei T series (10) Huawei U series (8) Huawei Update (104) Huawei V series (11) Huawei W series (3) Huawei Y series (56) I Mobile (1) ILOVFA (11) IMEI repair (13) imobile (1) Infinix (1) Infone (1) Inovo (38) ios firmware (3) ios icloud (3) IOS itune (8) IOS Itune Error (1) ios news (10) IOS Tool (10) IPhone Clone (22) K Touch (3) Kenbo (10) Kimfly (47) Kismo (3) KKP (19) knowledge (38) Lava (8) Leagoo (1) Leagool (2) Leegoog (19) Lenovo (12) LG (5) Liven (22) LoLo love (14) M-Horse (11) MAI (11) Marconi-W50E (1) MBO (97) MCT (2) medical knowledge (5) Meizu (58) MFT (4) MGT (33) mi account remove (55) Micro Art (2) mine (1) Momo (7) movies (11) MP3 (1) MPT (5) MyPhone (22) Newings (3) Nipda (3) Nokia (10) Nova (7) Open (1) Oppo (157) Oppo Clone (1) ORRO (7) OSE (3) PC (2) PHICOMM (5) photoshop (1) pinpaternpassword (1) Power (3) Prestigio (1) Professional (3) QBZ (1) Ramos (5) rapidleech (1) Recovery software (1) Red Star (1) Samsung B seires (1) Samsung Clone (203) Samsung combination (341) Samsung Full (43) Science (13) Server (2) SINGTECH (91) SKG (4) SM-J530F full (1) Sony (73) Speed (7) SYH (94) TCL (1) Teaching (2) tecno (92) Teeno (1) Telenor (7) TIMMY (4) titan (20) True Smart (51) TWZ (34) uneed (1) uptobox (2) VG (9) Video (12) Vinovo (8) VIOVO (3) Virtual card (1) Vital (15) Vitu (3) Vivo (187) Vivo Clone (1) Voto (1) vps (8) WainFord (1) Wave (26) web (2) Wiko (5) Window (76) X-BO (67) XDU (8) ZTE (25)
https://advertisingnewsidea.blogspot.com တွင် တင်ဆက်ထားသော content များသည် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ.. အွန်လိုင်းပေါ်မှ လတ်တလော စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်. . . သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကူးယူဖော်ပြခံရသော အွန်လိုင်းမီဒီယာများနှင့် စာရေးသူများကို လေးစားစွာဖြင့် credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ. . မီဒီယာများ အနေနဲ့ မိမိတို့ content များ ကူးယူဖော်ပြတာကို ကန့် ကွက်လိုပါက 1susutun@gmail.com ကို စာရေးသားပေးပို့ကန့် ကွက်နိုင်ပါတယ် . . . . . . .
Hello Firmware တွေ သူများ upload တင်ထားသာတွေ့လို့ ...
Android Huawei Imei Repair
Android Huawei Y series
Android kingo root
Android Samsung C series
Android Samsung E series
Android Samsung G series
Android Samsung I series
Android Samsung Imei repair
Android Samsung Multi file
Android Samsung N series
Android Samsung P series
Android Samsung Root
Android Samsung SC series
Android Samsung Solutions
Android Samsung T series
Browser Adobe Flash Player
Education Make up
Huawei board software collection
Huawei emmc data
Huawei J series
Huawei region code
IOS Itune Error
Samsung B seires
ads bit 392042
ads bit coin 391762
ads bit 913000
by Su Su Tun. Theme images by gaffera. Powered by Blogger.